Gmail: Ahoana ny fomba hamoronana hafatra valiny mandeha ho azy avy amin'ny Android | Androidsis
Ahoana ny fomba hamoronana hafatra valiny mandeha ho azy ao amin'ny Gmail avy amin'ny Android
Eder Ferreno | | Android cheat, Tutorials
Ho an'ny olona maro dia manomboka izao ny fialantsasatra. Androany, te-hifandray ianao ary tsy hahafantatra ny telefaona araka izay tratra. Noho izany, afaka miloka ianao alefaso ny fampandrenesana amin'ny telefaona ary amin'ity fomba ity dia afaka miala sasatra. Rindrambaiko iray izay matetika no dinihinay matetika avy amin'ny finday avo lenta dia Gmail. Ambonin'izany rehetra izany dia misy olona mampiasa azy io amin'ny asany.
Na dia mety tsy te hitandrina amin'ny Gmail aza ianao amin'izao fotoana izao. Ho an'izany dia azonao atao calamino ny valiny mandeha ho azy ao amin'ny kaontinao. Ka izay manoratra aminao dia hahazo valiny milaza amin'izy ireo fa vakansy ianao ary tsy misy amin'izao fotoana izao.
Ny hafatra valiny ho azy dia fiasa tena ilaina. Satria avelany hampandrenesina ny olona fa tsy misy izahay, satria manao vakansy, ohatra. Ho fanampin'ny famelana ny famerenana amin'ny hafa. Raha misy kaonty asa dia azonao atao ny mangataka anao mandefasa hafatra amin'ny adiresy manokana. Ny tsara indrindra dia afaka mamorona ireo karazana hafatra ireo koa isika amin'ny telefaona Android, amin'ny alàlan'ny fampiharana amin'ny telefaona.
Ahoana ny fomba hamoronana valiny haingana amin'ny Android
Mamorona valiny mandeha ho azy ao amin'ny Gmail
Mba hamoronana hafatra valiny mandeha ho azy ao amin'ny Gmail, tsy maintsy manao izany isika sokafy aloha ny finday amin'ny alàlan'ny finday Android. Raha vantany vao tafiditra ao anaty fampiharana isika dia mila manokatra ny menio sisiny. Ao amin'ny menio sisiny no ahitantsika safidy maromaro, izay mahaliana antsika ny hiditra ny fikirakiran'ny fampiharana. Ity safidy ity dia miorina amin'ny faran'ity menio ity.
Rehefa miditra ny fikirana, ny zavatra voalohany angatahina amintsika dia ny mifidy ny kaonty. Tsy maintsy misafidy ny kaonty izay tsy kasainao hampiasa io fialan-tsasatra io ianao, izay tianao hamoronana ireo valiny mandeha ho azy ireo. Ka raha kaonty miasa io dia tsy maintsy tsindrio ny mailaka mifandraika amin'io kaonty io. Tsindrio ilay adiresy mailaka voalaza ary ampidiro ny fizarana izay manondro an'io kaonty io.
Mila misosika mankany amin'izy ireo isika mandra-pahatonganao any amin'ny faritra valiny mandeha ho azy. Avy eo dia tsindrio eo amboniny, ka hisokatra amin'ny varavarankely vaovao. Ny zavatra voalohany hangatahin'ny Gmail amintsika dia ny hampandeha ity asa ity amin'ny fampiharana. Rehefa nampavitrika azy isika dia afaka manomboka amin'ny fikirakirana azy. Amin'io lafiny io dia manana fizarana maromaro hamenoana izahay:
daty: Angatahina isika hiditra ny daty fanombohana sy fiafaran'ity autoresponder ity. Ny zavatra lojika dia ny fampiasana izany amin'ny Gmail mandritra ny fialantsasatra ataontsika. Ampidiro ireo daty ireo rehefa fantatrao fa tsy hanontany an'ity kaonty ity ianao.
raharaham-barotra: Azonao atao ny mampiditra lohahevitra iray, toa ilay ampiasainay rehefa manoratra mailaka amin'ny alàlan'ny fampiharana izahay. Ity dia zavatra tokony hofidin'ny tsirairay raha toa ka heveriny ho misy ifandraisany izany. Azontsika atao ny mametraka zavatra toy ny fialan-tsasatra ao, na "Tsy misy aho." Zavatra manazava fa tsy misy izahay.
Message: Ity ny atiny, valiny mandeha ho azy izay horaisin'ilay olona manoratra amintsika. Ny zavatra mahazatra amin'ireo tranga ireo dia ny milaza fa manao vakansy na ivelan'ny birao isika, eo anelanelan'ny daty sasany. Ary koa raha mila zavatra ianao dia mifandraisa olona na faritra ao amin'ny orinasanay. Azontsika atao ny mametraka adiresy mailaka na nomeraon-telefaona amin'izany, hahafahan'izy ireo mifandray amin'ity olona ity hanohy ny zavatra ilainy. Tena ilaina amin'ny raharahan'ny mpanjifa orinasa.
Ahoana ny fanamboarana Gmail amin'ny telefaona Android
Vantany vao nofenoina ireo fizarana ireo, izahay dia efa namorona ny valiny mandeha ho azy izay tianay hampiasa amin'ny Gmail. Mamela antsika safidy farany ny rindranasa, izany hoe raha tsy te handefa an'ity hafatra ity afa-tsy amin'ny fifandraisana na amin'iza na iza no manoratra hafatra ho anay. Miankina amin'ny tsirairay sy ny fampiasana omena ny kaonty izany. Rehefa nanamarika an'ity safidy ity isika dia mila tsindrio fotsiny ny manaiky eo an-tampon'ny efijery. Amin'izany fomba izany dia noforonina ny valiny mandeha ho azy ary hiasa amin'ny daty nomarihinay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Tutorials » Ahoana ny fomba hamoronana hafatra valiny mandeha ho azy ao amin'ny Gmail avy amin'ny Android
Ny sasany amin'ny specs an'ny Samsung Galaxy A30 dia nipoitra tao amin'ny Geekbench alohan'ny nahitany mazava ny andro
EMUI 9.1: Ny vaovao rehetra ho tonga amin'ny telefaona